कोरोनाको सन्त्रास र आयुर्वेदीय उपचार विधि - Jhilko
कोरोनाको सन्त्रास र आयुर्वेदीय उपचार विधि
डा. सन्तोष ठाकुर, औषधि व्यवस्था विभाग, आयुर्वेद शाखा
विश्वभर फैलदैं गएको कोरोना भाइरसको स्पेसिफिक उपचार न एलोप्याथीमा छ न त आयुर्वेद चिकित्सकीय पद्धतिमा नै । वास्तवमा यो यस युगकै कहालीलाग्दो महामारीका रुपमा फैलिइरहेको रोग हो । तथापि रोग भन्ने वित्तिकै उपचार नै नहुने पनि होइन । जहाँ रोग हुन्छ, त्यहाँ कुनै प्रकारको उपचार विधि त भइहाल्छ । त्यस्तै यस्तो विपदका बेलामा ‘आयुर्वेद, योग तथा प्राकृतिक एवम् अन्य कुनै उपायले कोरोनाको ट्रिटमेन्ट गर्छु भन्दै अफवाह फैलायो भने त्यसको पछाडि नलागौँ भनेर म तपाईंको पत्रिकामार्फत् यो सन्देश पनि प्रबाह गर्न चाहान्छु ।
विश्वभरि नै यसलाई दुई तीनप्रकारले हेरिएको छ । पहिलो त कोरोनाको महामारीबाट बचावट रोकथाम कसरी गर्ने भन्ने नै हो । त्यस्तै यो जुनप्रकार एकबाट अर्कोमा सर्छ, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने दोस्रो कुरो हो । तेस्रोमा जो संक्रमित छ, त्यसका लागि व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने छ । यस्तो अवस्थामा जुनसुकै प्याथीले पनि अहिले गर्ने भनेकै यही मात्र हो । त्यसर्थ अहिले ज्वरो आयो भने त्यसलाई कम गर्ने, शरीरका महत्वपूर्ण अंगहरु जस्तै घाँटी, नाक, मुख र अन्य भित्री अंगहरुलाई सही हालतमा राख्ने कुराहरु अहिलेको अवस्थामा महत्वपूर्ण मानिन्छ । अहिले हामीले मुख्यरुपमा आयुर्वेदमा जुनप्रकार स्वास्थस्य स्वास्थ रक्षणम्, आतुरस्य विकार प्रशनम् ।।।‘ को सिद्धान्तअनुसार स्वास्थ्य रक्षा कसरी गर्ने भनेर नै हामीले भन्ने हो । हामी भान्छामा जुनप्रकार विभिन्न जडिवुटीजन्य खानेकुरा वा औषधिहरु प्रयोग गर्दछौँ, ती वास्तवमा अत्यन्तै उपयोगी छन् । जस्तो हामीले भान्छामा प्रयोग गर्ने बेसारमा एन्टी भाइरल वा एन्टी ब्याक्टेरियल प्रोपर्टी रहेको कुरालाई आधुनिक अनुसन्धान पद्धतिहरुले समेत पुष्टि गरिसकेका छन् ।
त्यस्तै सुठो, पिपला, मरिच अर्थात् जसलाई हामी त्रिकट्टु पनि भन्छौँ, यसले पनि शरीरमा रहेको अग्निलाई सम्यक गर्दछ, अर्थात् ज्वरोलाई नियन्त्रण गर्न लाभ पुग्दछ । यसरी शरीरमा यस्ता जडिवुटीहरुले रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता समेत बढाउनका लागि लाभ पुर्याउने गर्दछन् । यी चीजहरु हामी दिनहुँ प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ । यसरी नै हामीले तुलसी, बेसार र त्रिकट्टु मिसाएर एकप्रकारको पेय अर्थात् चियाजस्तो बनाएर पनि घरमै बसरे सेवन गर्न सकिन्छ । यस्तै हामीले आवश्यक तयारी गरेमा पनि रोगबाट बच्न र संक्रमण फैलिनबाट रोकथाम गर्न सक्छौँ ।
त्यस्तै हामीकहाँ सितोपलादी चूर्ण पाइन्छ । यो चूर्ण महसँग खाने गर्दा पनि रोग निवारण क्षमता बढाउन सकिन्छ । यो सस्तो छ, यत्रतत्र पाइन्छ । त्यस्तै हामीकहाँ गुर्जो पनि सहज तरिकाले पाइन्छ । आयुर्वेदमा यसका विभिन्न रुपहरु छन् अर्थात् आयुर्वेदमा यसलाई विभिन्न नामले चिनिन्छ । यसले रुघाखोकी, ज्वरो, सुक्खा खोकीलगायत श्वासप्रश्वास प्रणालीमा आउने समस्यालाई समाधान गर्न सहयोगी भूमिका खेल्दछ । त्यस्तै घरमै बसेर सुन्टीजल अर्थात् सुठोलाई पानीमा पकाएर दैनिक दुई तीन पटक सेवन गर्ने गरियो भने पनि ज्वरो, रुघाखोकीलगायत श्वासप्रश्वासका समस्याहरुबाट बाँच्न सकिन्छ । यी त घरमै बसेर गर्नसक्ने विधिहरु भए । त्यस्तै वाहिर पसलमा पाइने गुर्जो र गुर्जोबाट बनेका ट्याब्लेट, क्याप्सुल, सिरपजस्ता आयुर्वेदिक औषधिहरुको सेवनबाट पनि महामारीलाई दूर राख्न सकिन्छ ।
(समय सन्दर्भ पाक्षिकका सम्पादक डिल्लीराम भट्टराईले औषधि व्यवस्था विभाग, आयुर्वेद शाखाका डा. सन्तोष ठाकुरसँग लिएको अन्तर्वार्तामा आधारित भएर तयार पारिएको विशेष रिपोर्ट)
'गुटबन्दी र अराजकतामाथि बिराम लगाउँदै एकताको महान अभियानलाई अघि बढायौँ'
गोली प्रहार गरी गाँजा तस्कर पक्राउ
कार नरोकि भैरवडाडातर्फ भाग्न खोजेपछि वडा प्रहरी कार्यालय हेटौँडाका प्रहरी निरीक्षक...
महोत्तरी, धनुषा र सिन्धुली जिल्लाको सीमाक्षेत्र चुरे काछका बस्तीमा जङ्गली हात्तीको...
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकार स्थापित
कञ्चनपुरमा कोरोना सङ्क्रमणको ‘चेन’ पत्ता लगाउने काम शुरु
सशस्त्र प्रहरी बल ३५ गण झलारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुर, नेपाली सेना, वेदकोट...